Codsiga Sawirada ee iOS 15 ayaa noo sheegi doona barnaamijka arjiga sawirada laga keenay | Wararka IPhone
Codsiga Sawirada ee iOS 15 ayaa noo sheegi doona barnaamijka ay sawiradu ka yimaadaan
Ignacio Sala | 14/06/2021 18:00 | macruufka 15
Maalmuhu markay socdaan, waxay ogaadaan astaamo cusub oo Apple aysan ku shaacin WWDC 2021, shaqooyin in kastoo ay run tahay aysan xiiso u lahayn guud ahaan dadweynaha, haddii ay noqon karaan kuwa isticmaala qaarkood. Mid ka mid ah shaqooyinka xiisaha leh waxaa laga helaa arjiga Sawirada.
Codsiga Sawirada leh iOS 15, ayaa noo ogolaanaya marin xogta EXIF ​​ee sawirrada in aan ku keydinay aaladdeena oo ay weheliso macluumaadka meesha lagu qabtay (hadii ay ku jirto xogta GPS) marka lagu daro xog kale. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ogaano sida ay ku gaareen heerkeena.
Xaqiiqdii in ka badan hal munaasabad, markaad dib u eegis ku sameyneyso albamkaaga sawir, waad yaabaysaa sida qaar ka mid ah sawirada ama fiidiyowyada ay ku gaareen halkaas. Iyada oo la adeegsanayo IOS 15, waxaad si dhakhso leh oo fudud u garan kartaa asalka sawirradan.
Sida aan ku arki karno sawirka kore, metadata-ka ay Apple na siiso dhammaan sawirrada aan kaydinno, asalkooda sidoo kale waa la muujiyay. Marka laga hadlayo sawirka kore, waxaan arki karnaa sida eIsha sawirkaani waa arjiga Safari.
Markaad gujineyso Safari, arjiga tusi doonaa dhammaan sawirrada ka soo baxa isla isha. Waxaan rajeyneynaa in shaqadani ay sidoo kale aqoonsan tahay dhamaan sawirada iyo fiidiyowyada ku keydsan qalabkeena kana yimaada WhatsApp.
Hawl shaqo oo shaki la'aan ay ku qanacsan yihiin dhammaan adeegsadayaasha aan dhisin keydinta gacanta ee sawirrada iyo fiidiyowyada gudahood xulashooyinka arjigaan farriinta ah, maadaama ay kuu oggolaaneyso inaad dhammaantood wada tirtirto oo aad lacag badan ka baneyso.
Waqtigan xaadirka ah macruufka 15 waxaa kaliya loo heli karaa horumariyayaal. Ma noqon doonto illaa iyo bisha Luulyo, sida ay xaqiijisay shirkadda Apple, markii beta-kii ugu horreeyay loo bilaabay dhammaan kuwa isticmaala ee qayb ka ah Barnaamijka beta ee dadweynaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » Codsiga Sawirada ee iOS 15 ayaa noo sheegi doona barnaamijka ay sawiradu ka yimaadaan
Apple wuxuu sii daayaa betas saddexaad ee iOS 14.7, watchOS 7.6 iyo macOS 11.5
Ciyaar cusub oo laga heli karo Apple Arcade: Halyeeyada Boqortooyada